UPistorius ungeniswe kwelinye ijele njengokwesicelo sakhe | News24
UPistorius ungeniswe kwelinye ijele njengokwesicelo sakhe
Johannesburg – Uhulumeni uthi lowo owalahlwa yicala lokubulala intombi yakhe, u-Oscar Pistorius, usengeniswe kwelinye ijele elingcono, elikwazi ukubhekana nezimo zeziboshwa ezikhubazekile njengokwesicelo.
UMnyango wezokuHlunyeleliswa kweziMilo ngoMsombuluko uthe uPistorius ususwe eKgosi Mampuru II ePitoli wangeniswa e-Atteridgeville Correctional Centre, esanda kulungiswa ukuze kusizakale iziboshwa ezikhubazekile.
OLUNYE UDABA: Lihlehlisiwe icala elibhekene noMalema
UMnyango uthe ijele lase-Atteridgeville ligcina iziboshwa ezidonsa iminyaka engafinyelela kweyisithupha ejele, futhi inezinhlelo zokusiza iziboshwa ziguqule izimpilo zazo ngaphakathi.
Izikhulu zoMnyango zithi iKgosi Mampuru intula izinhlelo ezifanele okungasizakala ngazo uPistorius esimeni sokukhubazeka anakho.
UPistorius udonsa iminyaka eyisithupha ejele ngokubulala intombi yakhe uReeva Steenkamp ngo-2013.